တွစ်တာထဲကရရှိရန်မည်သို့ - တွစ်တာ - 2019
အွန်လိုင်းမဆိုအကောင့်အတွက်သင်အမြဲကထွက်ရဖို့ဘယ်လိုသိသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သင်ရိုးရှင်းစွာအခြားအကောင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ချင်ရှိမရှိမပါကွာခြားချက်ရှိပါသည်။ အဓိကအရာက Twitter ထွက်ခွာလျှင်မြန်လွယ်ကူဖြစ်ပါတယ်။
မည်သည့် platform ပေါ်တွင်တွစ်တာကနေစွန့်ခွာ
ဖြစ်စဉ်ကိုရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူတဲ့အဖြစ် Twitter ပေါ်တွင်ခွင့်ပြုခြင်းပယ်မည်။ နောက်ထပ်အရာသည်ဤအမှု၌ကွဲပြားခြားနားသောကိရိယာများပေါ်တွင်, လုပ်ရပ်များ၏ algorithm ကိုအနည်းငယ်ကွဲပြားစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ တွစ်တာ၏ Browser-based ဗားရှင်းမှာ "အထဲက Log" တစ်လမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသည်, ဥပမာ, Windows 10 ကိုများအတွက်လျှောက်လွှာအတွက် - ကွဲပြားခြားနားသောအကိုက်။ ကအားလုံးကိုအခြေခံရွေးချယ်မှုများထည့်သွင်းစဉ်းစားရကျိုးနပ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
တွစ်တာ၏ Browser ကို-based ဗားရှင်း
browser ကိုအတွက်တွစ်တာအကောင့်မှထုတ်ယူဖြစ်ကောင်းအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ကို web version ကိုခွင့်ပြုခြင်းပယ်မည်သည့်အခါလုပ်ရပ်များ၏ sequence ကိုလူတိုင်းသိသာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် Twitter ကို၏ Browser-based ဗားရှင်းများတွင် "ကနေ log out" ရန်, ပထမဦးဆုံးအရာမီနူးဖွင့်လှစ်ရန်ဖြစ်ပါသည် "ကိုယ်ရေးဖိုင်နှင့် Preferences ကို"။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ရိုးရိုးလာမယ့်ခလုတ်ကိုကြှနျတျောတို့၏ကိုယ်ပွားကို click "Tweet".
ထို့ပြင် drop-down menu ကထဲမှာ, ကို item ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ "Exit ကို".
ထိုနောက်မှသင်သည်သူတို့၏အကောင့်ကိုအောင်မြင်စွာထွက်ခွာခဲ့ကြဆိုလိုတာက, သင်အောက်ပါအကြောင်းအရာများကိုနှင့်အတူစာမျက်နှာရ, နှင့်ရဲ့ login form ကိုနောက်တဖန်တက်ကြွစွာပါ။
Windows 10 ကိုများအတွက်တွစ်တာ app ကို
လူသိများသည်အတိုင်း, လူကြိုက်များမိုက်ကရိုဘလော့ဂ်များဝန်ဆောင်မှုကို client လည်း Windows က 10 ရက်နေ့တွင်မိုဘိုင်းနှင့် desktop ပေါ်မှာ device များအတွက်လျှောက်လွှာအဖြစ်တည်ရှိပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုသည်အဘယ်မှာရှိဒါဟာအရေးမပါဘူး - သင့်ဖုန်းတွင်သို့မဟုတ်တစ်ကို PC ပေါ်မှာ - လုပ်ရပ်များတစ် sequence ကိုအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ icon ကိုကလစ်နှိပ်ပါရန်ဖြစ်ပါသည်။
သင့်ကိရိယာ၏မျက်နှာပြင်၏အရွယ်အစားပေါ်တွင် မူတည်. ဒီ icon ကိုအောက်ခြေမှာနှင့်မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာနှစ်ဦးစလုံးတည်ရှိနိုင်ပါသည်။
ယင်းနောက်နောက်နေ့ခလုတ်ကိုဖို့လူနှစ်ဦးနှင့်အတူ icon ကို click "Settings" ကို.
drop-down menu ကိုပြုလုပ်ပြီးနောက်, select လုပ်ပါ "Exit ကို".
ထိုအခါ pop-up dialog box ကိုခွင့်ပြုခြင်းပယ်မည်အတည်ပြုပါ။
ထိုအားလုံးပဲ! Windows 10 ကိုများအတွက်တွစ်တာအကောင့်လျှောက်လွှာသို့အောင်မြင်စွာဖန်ဆင်းထားသည်ထွက်ပါမည်။
iOS နဲ့ Android မိုဘိုင်းလိုင်း
ဒါပေမယ့် Android နှင့် iOS အတွက်ပလီကေးရှင်း algorithm ကိုလုနီးပါးတူညီဖြစ်ပါတယ်ခွင့်ပြုခြင်းပယ်မည်။ ထို့ကြောင့်မိုဘိုင်း client ကို logoff ဖြစ်စဉ်ကိုအကောင့်ထဲမှာဥပမာတစ်ခုက "အစိမ်းရောင်စက်ရုပ်" ဟုအဆိုပါ gadget ကအပြေးစဉ်းစားပါ။
ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးကျနော်တို့လျှောက်လွှာ၏ဘေးထွက် menu ကိုသှားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့, ဝန်ဆောင်မှုများ၏ဘရောက်ဇာဗားရှင်း၌ရှိသကဲ့သို့, မျက်နှာပြင်၏ဘယ်ဘက်အစွန်ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်အိုင်ကွန်, ဒါမှမဟုတ်တခြား svaypaem ညာဘက်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဒီ Menu ထဲမှာကျနော်တို့ကို item စိတ်ဝင်စား "ဆက်တင်များနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေး"။ အဲဒီမှာနှင့်သွားပါ။
ထိုအခါအပိုင်းကိုလိုက်နာ "အကောင့်" နှင့်ကို item ကို select "Exit ကို".
တနည်းကား, ကျနော်တို့ကကမ္ပည်းအတူရဲ့ login page ကိုမြင်နေကြသည် "တွစ်တာမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်".
ဒါကကျနော်တို့အောင်မြင်တဲ့များမှာ "ကနေ log out" ကိုဆိုလိုသည်။
ဤရွေ့ကားမဆိုစက်ပေါ်ရှိတွစ်တာရရှိရန်လုပ်ဆောင်ရပါမည် Uncomplicated ခြေလှမ်းများဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျ, ကအကြောင်းရှုပ်ထွေးလုံးဝဘာမျှမကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့။
ဗီဒီယို Watch: 8 Hour Multi-Dimensional Lucid Dream Adventure - "Suspended in Space" - Binaural Beats Music (အောက်တိုဘာလ 2019).